Mogadishu Journal » 2018 » June » 7
Ra’iisal wasaare Kheyre oo la kulmay madaxweynaha dalka Jabuuti
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo booqasho labo cisho ku jooga dalka Jabuuti ayaa la kulmay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Kulankan ayaa ka dhacay Qasriga Madaxtooyada Jabuuti, halkaasoo wafdiga uu hoggaaminayo Ra’iisul...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay Kaaliyaha Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay uu qaabilsan arrimaha siyaasadda Rosemary dicalro oo uu wehliyey ergeyga QM ee Soomaaliya....
Somaliland oo aqbashay lacagtii dowladda Soomaaliya ugu deeqday
Mjournal :-Maamulka Somaliland ayaa aqbalay, soona dhoweeyay lacagtii ay dhowaan dowladda Soomaaliya ugu tala gashay gurmadka dhibaatadii ka dhalatay duufaantii ku dhufatay deegaanada Gobolka Awdal. Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Sacad Cali Shire ayaa sheegay inay soo...
Kenya oo amartay in jawaab deg deg ah laga bixiyo weerarkii Libooyo
Mjournal :-Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dagaal culus uu saaka aroortii hore ka dhacay deegaanka Daynuunaay, kaddib markii Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidanka dowladda ku lahaayeen deegaankaas. Dagaalka ayaa ahaa mid culus oo la sheegayo inuu ku...
Difaaca kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa ku eedeysan dhibaatooyin fara badan oo uu u geystay ciyaartoyda kooxda Liverpool kullankii Final-ka ee Champions League-ga is wajahaeen labada kooxood bishii lasoo dhaafay. Kabtanka Los Blancos ayaa dhibaato iyo weerarro afka ah...
Mjournal :-Dab xooggan ayaa qabsaday mid kamid ah hoteellada raaxada ee kuyaal bartamaha magaalada London, todobbaad uun kadib markii dib loo cusboonaysiiyey uuna dhammaystay taariikhdiisa oo gaaraysa 115 sano. Holac iyo qiiq kasoo baxaya ayaa la arkayey hoteelka wayn ee lagu...
Mjournal :-Ugu yaraan 46 qof oo tahriibayaal ah oo Soomaaliya ka dhoofay kuna socday dalka Yemen ayaa doon ay saarnaayeen waxay kula dagtay xeebaha Yemen, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Waxaa sidoo kale la baadigoobayaa 16 qof oo kale kadib markii doontoodii ay gadoontay,...
Al-shabaab oo weerar xooggan ku qaaday deegaanka Deynuunaay